Waxaana ka fogaan waanada Ruuxa xune.
Ee ah mid gali Naar wayn.
Oon kuna dhimanayn dhexdeeda kuna noolanayn.
Waxaana liibaanay Ruuxii Daahir noqda.
magaca Eebana Xusa, Salaaddana tukada.
Saas ma'aha ee Dadku wuxuu doortay nolosha Adduunyo ee dhaw.
Aakhiraase khayr badan baaqina ah (hadhi).
Arrintaasuna waxay ku sugantahay Kutubtii hore.
Kutubtii (Nabi) Ibraahim iyo (Nabi) Muuse.
Ma ku soo gadhay Qiyaamada warkeedii.
Wajiyaal Maalintaas way dullaysnaan.
Waxayna qaban Shaqo dhib ah.
Waxayna gali Naar kulul.
Waxaana laga waraabin il kulayl daran.
Wax cunto ahna kama helaan oon ahayn cunno xun (oo wax dhibta).
Taasoon waxna cayilinhaynin Gaajana wax ka taraynin.
Wajiyaalna maalintaas way Nicmaysnaan (Waa mu'miniinta).
Waxayna ka raalli noqotay camalkeedii.
Janno sarana way gali.
Kumana maqasho Jannada hadal macna darro.
Waxaana ah dhexdeed il socota.
iyo Sariiro la koryeelay.
Iyo koobab la hor dhigay (ehlu Jannaha).
Iyo Barkimooyin la safay.
Iyo gogol la fidiyay.
Iyo sida Samada loo koryeelay.
Iyo sida Ruuraha loo taagay,
Iyo sida dhulka loo fidiyay.
Ee Waani dadka waxaad tahay waaniyee (Nabiyow).
Mana tihid mid xoog ku leh (qasab).